မောင်ဖြစ်သူရဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲကို သွားရောက် ဝန်းရံခဲ့ပြီး အားပေးစကားများ ဆိုခဲ့တဲ့ “သင်ဇာဝင့်ကျော်” – Myanmar Update News
မောင်ဖြစ်သူရဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲကို သွားရောက် ဝန်းရံခဲ့ပြီး အားပေးစကားများ ဆိုခဲ့တဲ့ “သင်ဇာဝင့်ကျော်”
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ အောင်မြင်မှု များစွာနဲ့ အနုပညာလမ်းကို လျှောက်လှမ်း နေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ဇာတ်ကားပေါင်း များစွာရိုက်ကူး ခဲ့တဲ့အပြင် အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထား တာကြောင့်လည်း ပုရိသတွေ ရဲ့သဲ သဲလှုပ် အားပေး ဝန်းရံခြင်းကို ခံနေရသူ တစ်ဦးလို့ ဆိုရမှာပါ။
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ အားကစား လိုက်စားသူ ဖြစ်တာကြောင့် GYM ပုံမှန်သွားကာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အမြဲမပြတ် လုပ်လေ့ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်လည်း သင်ဇာဝင့်ကျော်က သူမလိုမျိုးအားကစား လိုက်စားတဲ့ မောငးဖြစ်သူရဲ့ လက် ဝှေ့ပွဲ ကို သွားရောက် ဝန်းရံခဲ့ပြီး ရှုံးသွားလည်း စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ ဆက်ကြိုးစားဖို့ စိတ်ခွန်အားတွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။
သင်ဇာကတော့ “ အနိုင် နဲ့ အရှုံး နှစ်မျိုး ပဲရှိတယ် … ယှဉ်ပြိုင်ချင်း သာအဓိကပါ … ရှုံးသွားလဲ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ ဆက်ကြိုးစားပါ … ပထမဦးဆုံး အတွေ့အကြုံဆိုတော့လဲ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့ … အတွေ့အကြုံ ကနေသင်ခန်းစာယူနိုင်ပါစေ ငါ့မောင်လေး … Whatever u didagreat job, keep fighting !!!🦾Always support u 🖤🖤”ဆိုပြီး
သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီး အတွက် မောင်ဖြစ်သူ အတွက် အားပေး စကားဆိုခဲ့တဲ့ သင်ဇာ ရဲ့ အကြောင်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။ Source – ThinZar Wint Kyaw
(Unicode version) မောငျဖွဈသူရဲ့ လကျဝှပှေဲ့ကို သှားရောကျ ဝနျးရံခဲ့ပွီး အားပေးစကားမြား ဆိုခဲ့တဲ့ “သငျဇာဝငျ့ကြျော”
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ သငျဇာဝငျ့ကြျော ကတော့ အောငျမွငျမှု မြားစှာနဲ့ အနုပညာလမျးကို လြှောကျလှမျး နသေူတဈဦး ဖွဈပါတယျ။သူမကတော့ ဇာတျကားပေါငျး မြားစှာရိုကျကူး ခဲ့တဲ့အပွငျ အမိုကျစား ကောကျကွောငျး အလှကို ပိုငျဆိုငျထား တာကွောငျ့လညျး ပုရိသတှေ ရဲ့သဲ သဲလှုပျ အားပေး ဝနျးရံခွငျးကို ခံနရေသူ တဈဦးလို့ ဆိုရမှာပါ။
အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျော ကတော့ အားကစား လိုကျစားသူ ဖွဈတာကွောငျ့ GYM ပုံမှနျသှားကာ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ အမွဲမပွတျ လုပျလရှေိ့သူ တဈဦးဖွဈပါတယျ။
အခုဆိုရငျလညျး သငျဇာဝငျ့ကြျောက သူမလိုမြိုးအားကစား လိုကျစားတဲ့ မောငးဖွဈသူရဲ့ လကျ ဝှပှေဲ့ ကို သှားရောကျ ဝနျးရံခဲ့ပွီး ရှုံးသှားလညျး စိတျဓာတျမကဘြဲ ဆကျကွိုးစားဖို့ စိတျခှနျအားတှေ ပေးခဲ့ပါတယျ။
သငျဇာကတော့ “ အနိုငျ နဲ့ အရှုံး နှဈမြိုး ပဲရှိတယျ … ယှဉျပွိုငျခငျြး သာအဓိကပါ … ရှုံးသှားလဲ စိတျဓာတျမကပြါနဲ့ ဆကျကွိုးစားပါ … ပထမဦးဆုံး အတှအေ့ကွုံဆိုတော့လဲ ဒီလောကျတော့ ရှိမှာပေါ့ … အတှအေ့ကွုံ ကနသေငျခနျးစာယူနိုငျပါစေ ငါ့မောငျလေး … Whatever u didagreat job, keep fighting !!!🦾Always support u 🖤🖤”ဆိုပွီး
သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာ ရေးသားထားတာ ပဲဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီး အတှကျ မောငျဖွဈသူ အတှကျ အားပေး စကားဆိုခဲ့တဲ့ သငျဇာ ရဲ့ အကွောငျးလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော…။ Source – ThinZar Wint Kya